ဘယ်အချိန်က ကော်ဖီသောက်ဖို့ အကောင်းဆုံးလဲ
နေ့တနေ့ကို လန်းဆန်းတက်ကြပြီး အတွေးသစ်တွေ ရရှိအောင် နံနက်ခင်းမှာ ကော်ဖီနံ့သင်းသင်းလေးနဲ့ အစပြုရင်း အလုပ်လုပ်ကျတဲ့သူတွေရှိသလို ကော်ဖီခါးခါးတစ်ခွက်နဲ့ စာအုပ်ဖတ်ရင်း အားလပ်ချိန်ကို အကောင်းဆုံးကုန်ဆုံးကြသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။
ကော်ဖီကို နှစ်ချိုက်ကြတဲ့ လူတိုင်းကတော့ ကော်ဖီသောက်လိုက်ရင် ပင်ပန်းမှုတွေ ပြေပျောက်ကာ လန်းဆန်းသွားပြီး စိတ်ကူးကောင်းတွေ၊ အတွေးအခေါ်သစ်တွေ ခံစားယုံကြည်ကြပါသေးတယ်။
ကော်ဖီသောက်တာက ကင်ဆာဖြစ်တန်စွမ်းကို လျှော့ကျစေခြင်း၊ နှလုံးရောဂါ ၊ ဆီးချိုရောဂါလျှော့ကျစေတယ်လို့ သုတေသနမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ အဖြစ်များတဲ့ ပါကင်ဆန်ရောဂါ (Parkinson’s disease) ကိုတောင် ၃ဝ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ကော်ဖီသောက်သုံးသူတွေဟာ ကော်ဖီမသောက်တဲ့သူတွေထက်ပင် အသက်ရှည်ရှည် နေထိုင်နိုင်ကြတယ်လို့ ဆိုထားကြပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တန်ဆေး လွန်ဘေးဆိုတဲ့အတိုင်း ကော်ဖီအများကြီးသောက်ရင်တော့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် ကော်ဖီသောက်ပြီး ကောင်းကျိုးတွေ ခံစားနိုင်အောင် ကော်ဖီသောက်သုံးရာမှာ သိထားသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးလိုက်တယ်နော်...
Recommended for you - ဆရာ/မများထပ်ခန့်ရန် ပိုက်ဆံမရှိသေးဟု ပညာရေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြော
Recommended for you - လူရာဝင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ?
Recommended for you - ယူနက်စကို၏ နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာစင်တာ အင်းစိန်ဂျီတီအိုင်တွင်ဖွင့်မည်
Read 994 times Last modified on Tuesday, 17 July 2018 10:13
"ဘွဲ့ ရသူနဲ့ ပညာတတ်သူ"
Curtin Singapore မှ ပညာသင်ဆုများ ပေးအပ်မည်
Video game ကစားတဲ့သူတွေက တခြားသူတွေထက် ဥာဏ်ပိုကောင်းပါတယ်။
ဆောက်လုပ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ ၊ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဘွဲ့အတွက် Study Grant ပေးအပ်မည်
စိတ်ပျက်ပြီး အားငယ်နေရုံနဲ့ ကိစ္စတွေက ပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားမှာလား
စာမေးပွဲအတွက် အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲ ???